You see... if she allows me to lead, she's trusting me. But more than that, she's trusting herself.
And if your son... can learn to touchagirl with respect, how will he treat women throughout his life?
Teach your kids about respect and dignity.
This may seem likeasimple question requiring the simple answer "Yes, it isareligion", like Hinduism, Islam and Christianity. It has followers,akind of priesthood, elaborate rituals, impressive temples, scriptures and so on. In one sense then Buddhism isareligion. Religion comes from the Latin word "religio" which means "to bind". It implies that we as human beings are insecure about ourselves in this existence and have therefore to "bind" ourselves to an external power which can provide some kind of protection and "save" us from present or future misfortune.
Buddhists do not bind themselves to the Buddha as if he is God, but they do rely on his teachings to help them escape the problems of existence. There isadifference though. Buddhists only use the Teachings and even the Buddha merely asameans to an end, and not as ends in themselves. The aim of Buddhists is not to meet the Buddha in heaven after death.
The Buddha usedafamous parable ofaraft to explain this point. A man sets out onajourney to get toacertain destination, but on the way he comes to great river which he has to cross. He has two options. The first is he could kneel down and pray for the other bank to come to him, which will never happen. The other option is to apply his energy and resourcefulness to cut down some bamboo, makearaft and row himself across. The raft isameans to cross the river, but the man's destination is elsewhere. Having crossed the river he must continue his journey: there is no need to carry the raft on his head anymore.
What the Buddha means is that he and his teachings are merely the means to reach final deliverance. We use both to get us part of the way, but the journey is completed by ourselves. We employ skillful means to use the raft but in the end we save ourselves. Gathering the bamboo and making the raft refers to the various devices we have created over the years to practice the Teachings, which we recognize as the "Buddhist Religion". As we progress, we rely less and less on those means and finally we arrive atastage where we are confident enough to continue the journey alone. So in one sense we are "bound" to this religion called Buddhism but in the other sense we are expected to break free and rely on ourselves.
According to the Oxford English Dictionary, religion is described as "The recognition ofasuperhuman controlling power, and especially ofapersonal God, entitled to obedience"
By this definition Buddhism does not qualify asareligion in the accepted sense, because Buddhists certainly do not accept the concept ofaCreator, who is entitled to obedience, and who can reward or punish indiscriminately. The Buddha is seen asaperfect human being who discovered the secrets of the universe and showed humanity the Path to Enlightenment.
Taken from "A Buddhist Reflects on Ten Questions"
Collection of Patthana(Conditional and Casual Relations) links ပဌာန်း ပစ္စယနိဒ္ဒေသ (၂၄ပစ္စည်းအကျယ်)
Patthana Explanation in English
Patthana in Wikipedia
ပဌာန်းပါဋိတော် ပစ္စယနိဒ္ဒေသ မြန်မာပြန်
မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ပဌာန်းပါဋိတော်အကျယ် ဗီဒီယိုဖိုင်
အရှင် သီလာနန္ဒာဘိဝံသ၏ အဘိဓမ္မာသင်တန်းပို့ချချက်များ
Mediafire Link 1 အကုသိုလ်စိတ် အဟိတ်စိတ် အရူပါဝါစရ စိတ်များ - ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမ္မာ ပစိမ္ဆာနံပစိမ္ဆာနံအဗျာကတာနံ ဓမ္မာနံ အနက်အဓိပ္ပါယ်များ နားလည်ရန် ကုသိုလ် အကုသိုလ် အဗျာကတစိတ်များ ရှင်းလင်းထားသည်။
ကျွန်တော် ဒီတစ်ခေါက် ဇာတိမြေပြန်တော့ ထုံးစံအတိုင်း ပညာရေးအသိုင်းအ၀ိုင်းက မိတ်ဆွေတွေထံကို သွားလည်မိပါတယ်။ သူတို့နဲ့တွေ့ဆုံရတာ ပညာရေးအကြောင်းတွေလည်း မျက်ခြေမပြတ်၊ ရင်ဖွင့်သံတွေ လည်းကြား၊ စာရေးဖို့ ကုန်ကြမ်းတွေလည်းရတတ်လို့ ယခင်မိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်း ဆရာတွေကို မဖြစ် မနေ သွားရောက်တွေ့ဆုံ စကားတွေပြောမကုန်အောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီတစ်ခေါက် ထူးဆန်းတဲ့စကားတစ်ခွန်းကို ကြားရတယ်။ "လေးတန်းကျောင်းသား သတင်းစာမဖတ်တတ်ဘူး"။ ထူးဆန်းလိုက်တဲ့စကားကို ပြောသူက ကျွန်တော့် ဆရာ လက်ထောက်မြို့နယ်ပညာရေးမှူးတစ်ယောက်။ "နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲက ဒုတိယတန်းရောက်ရင် သတင်းစာလေးတော့ ဖတ်တတ်အောင် လုပ်ပေးကြပါ" လို့ပြောလိုက်တယ်။ သိတယ်မဟုတ်လား ဒီမှာက လူကြီးတစ်ခွန်းပြောလိုက်မှာ ပြူးပြူးပြာပြာ ဖြစ်ကုန်ကြတာ။ ဒါနဲ့ ပညာရေးသုတေသနက ပညာရှင်တွေ သုတေသနသမားတွေ ကျွန်တော်တို့နယ်ကို ဆင်းလာကြ တယ်။ ကျောင်းတွေကို တစ်ကျောင်းဝင် တစ်ကျောင်းထွက် သတင်းစာဖတ်ပွဲကြီးတွေ လိုက်ကျင်းပကြတယ်။ ပထမဦးဆုံး ဒုတိယတန်းကို ၀င်တယ်။ ကလေးတစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီး သတင်းစာဖတ်ခိုင်းတယ်။ စာလုံးတောင် မပေါင်းတတ်ဘူး။ နောက် တတိယတန်းကိုတက်၊ သတင်းစာဖတ်ခိုင်း မရ၊ စတုတ္ထတန်းကို တက်၊ သတင်းစာ ဖတ်ခိုင်း မရ၊ နောက်ဆုံး ပဉ္စမတန်းအထိတက်၊ သတင်းစာဖတ်ခိုင်း။ သေချင်စော်နံသွား တယ်။ မဖတ်တတ်ဘူး။ နောက်တစ်ဆင့် မတက်ခိုင်းတော့ဘူး။ တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်ပြီး ပြန်လာခဲ့ကြတယ်။ ခုထိ အဖြေလည်းမရှာ၊ အမေးလည်းမထုတ် ဘာမှလည်းမလုပ်နဲ့ သုတေသနဆိုတာ ရှာဖို့သက်သက်ပဲ လာလုပ်တယ် ထင်ပါတယ်။ ကလေးတွေ စာမဖတ်တတ်တော့တာတော့ အမှန်ပဲ" လို့ ဆရာက စကားစ ဖွင့်လိုက်တယ်။ ဒီမှာတင် မူလတန်းကျောင်းအုပ်ကြီးတစ်ယောက်က "ဆရာတို့ လွှတ်လိုက်တဲ့ ဆရာမအသစ်တွေကလည်း ကြည့်ဦးလေဗျာ "သြ" ကို "သ ရရစ် အော" လို့ ကလေးတွေကို စာလုံးပေါင်းသင်တယ်။ ကကြီး ခခွေး သဝေထိုး အရစ်အဆွဲမမှန်၊ စာကို ဋ္ဌာန်ကရိုဏ်းကျကျ မဖတ်တတ်။ ၀လုံးနဲ့ သုည ဆွဲချင်သလိုဆွဲ။ ကလေးတွေကို စာလုံးမပေါင်းပြဘဲ အလွတ်တိုင် အလွတ်လိုက် ဆို၊ အလွတ်လိုက်ရေး အောင်မှတ်ပေးနေတာ" လို့ ထပြောလိုက်တယ်။ "သတင်းစာ မဖတ်တတ်ဘူးဆိုတဲ့ ကလေးကို ဖတ်စာအုပ်ဖတ်ခိုင်းတော့လည်း အဆင်ကို ချောနေတာပဲ။ ကလေးတွေ ကျောင်းစာကိုပဲ သိတော့တယ်။ အပြင်စာကို လုံးဝမဖတ်နိုင်တာ" "ကျောင်းစာကို သိတယ်ဆိုတာ နေ့စဉ် အတိုင်အဖောက်နဲ့ ဆရာက ဖတ်ပြနေတဲ့အတိုင်း သိတာ။ စာလုံးပေါင်းဖတ်နည်းကို ဆရာကလည်း မတတ်၊ တပည့်တွေကိုလည်း အချိန်ကုန်ခံပြီးမသင်တော့ စာဘယ် မှာဖတ်တတ်တော့မှာလဲ" ကျွန်တော်တို့ စကားဝိုင်းက ကောင်းလာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကလေးတွေ စာမဖတ်တတ်တာကို အဖြေရှာ ကြည့်ကြတယ်။ ပထမအချက်က ဆရာတွေကိုယ်တိုင် စာမဖတ်ဘူး။ စာဖတ်အားနည်းရတဲ့အထဲ မပြေလည် တာကို အကြောင်းပြပြီး ကျူရှင်တွေ ခေါ်သင်တယ်။ ကျူရှင်သင်တယ်ဆိုလို့ အထွေအထူးတတ်အောင် မဟုတ်ဘူး ကျောင်းသင်စာကို အိမ်ခေါ်ပြီး ပြန်အော်ခိုင်းတာ။ ပိုက်ဆံယူကောင်းအောင်ပေါ့။ ကလေးတွေ ကျောင်းလွှတ်ရင်အိမ်လာ။ တစ်နာရီ နှစ်နာရီလောက် စာအော်ကြ။ ဆရာမကတော့ အိမ်နောက်ဖေးမှာ ချက်ပြုတ် လျှော်ဖွတ်မပျက် ဒီကနေ စပျက်တော့တာပဲ။ နောက်တစ်ချက်က ကျောင်းတွေမှာ ကလေးတွေ စာဖတ်အားတက်စေတဲ့ စာအုပ်၊ စာပေတွေ မရှိတော့ဘူး။ စာကြည့်တိုက်မရှိဘူး။ ရှိလည်း ဖွင့်မပေးဘူး။ ကလေးတွေဆိုတာ မျက်စိထဲမှာ အရုပ်များများနဲ့ စာတွဲထား တာမြင်ရင် စိတ်ဝင်စားကြတယ်။ လိုက်ဖတ်တယ်။ ကာတွန်းကြိုက်တယ်။ ကာတွန်းတွေ့ရင် လိုက်ဖတ် တယ်။ ကာတွန်းစာအုပ် ကျောင်းယူလာရင် ဆရာကသိမ်းပြီး သူကိုယ်တိုင် ကာတွန်းစာအုပ်ကို အတန်း ရှေ့မှာ ထိုင်ဖတ်နေတဲ့ အဆင့်လောက်ရှိတဲ့ ဆရာတွေနဲ့ ပညာခေတ်ကို မထူထောင်နိုင်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ကနေ့စာဖတ်နေတာ၊ စာရေးနိုင်တာတွေဟာ သုံးတန်း လေးတန်းလောကတုန်းက ကျောင်း စာကြည့်တိုက်ကြောင့်ပါ။ ကျောင်းစာကြည့်တိုက်ကို ၀င်ကြေးတစ်မတ်ပေးရတယ်။ ကတ်ပြားထုတ်ပေး တယ်။ စာအုပ်ငှားလို့ရတယ်။ စာကြည့်တိုက်ထဲမှာ ထိုင်ဖတ်လို့ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပုံပြင်စာအုပ်တွေကို ကျောင်းလွှတ်တိုင်း အလုအယက်သွားဖတ်ကြတယ်။ အိမ်ကိုငှားရင်လည်း ပုံပြင်စာအုပ်တွေပဲငှားတယ်။ စာကြည့်တိုက်ထဲမှာ ဘားမားစတားကာတွန်းစာစောင်တွေ ပုံထားတယ်။ မောင်ကမ္ဘာကာတွန်းစာအုပ်တွေရှိ တယ်။ ကာတွန်းတွေဖတ်ကြတယ်။ သတင်းစာလည်း ထားပေးထားတယ်။ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းတွေ အပုံလိုက် စားပွဲပေါ်တင်ပေးထားတယ်။ မနက်စောစောကျောင်းမတက်ခင်တစ်ချိန်၊ နေ့ခင်းထမင်းစားလွှတ်ချိန် တစ်ချိန်စာကြည့်တိုက်ထဲ ပြေးပြီး စာအုပ်လုကြတာအရသာတစ်မျိုးလို ခုထိခံစားရတယ်။ အဲဒီအချိန်က သဘောထားကြီးစွာနဲ့ စာကြည့်တိုက်ဖွင့်ပေးတဲ့ ဆရာတွေကို ကျေးဇူးတင်မိတယ်။ ကျွန်တော် နာမည်ကြီးကျောင်းကြီးတစ်ကျောင်းမှာ ပင်စင်မယူမီအထိ အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ကျောင်းကို ရောက်တော့ ကျောင်းအုပ်ကြီးဆီကို စာကြည့်တိုက် ဘယ်မှာလဲလို့ သွားမေးရတယ်။ ကျောင်းအုပ်ကြီးက "ခု စာသင်ခန်းဖွင့်ထားတဲ့ ခုနှစ်တန်းနေရာ" လို့ပြောလိုက်လို့ စာကြည့်တိုက်ကို သွားကြည့်တယ်။ စာအုပ် ဘီရိုကြီးတွေ ခန်းလုံးပြည့် ၁၀ လုံးလောက်ရှိမယ်။ စာအုပ်တွေလည်းအပြည့်။ ဒါပေမယ့် ဖုန်တွေတက်၊ ၀ါညစ်ဆွေးမြေ့နေကြပြီ။ စာကြည့်တိုက်ဘီရိုကိုဖွင့်တဲ့ သော့တောင်ရှာမတွေ့တော့ဘူး။ ကျွန်တော် ဆရာအတတ်သင်တန်း တက်တုန်းကလည်း မှတ်မိသေးတယ်။ ဆရာအတတ်သင်မှာ စာကြည့် တိုက်ရှိတယ်။ တက္ကသိုလ် ကောလိပ်တွေမှာလို ဌာနတစ်ခုအနေနဲ့ ထားပေးပြီး၊ စာအုပ်တွေငှားပေးတာ။ ကျွန်တော် စာကြည့်တိုက်ထဲရောက်တော့ မဖတ်ဖူးသေးတဲ့ စာအုပ်တွေကို ဘီရိုအပြည့်သွားတွေ့တယ်။ နိုင်ငံခြားကနေ လှူဒါန်းထားတဲ့ ပညာရေးဆိုင်ရာ စာအုပ်တွေပေါ့။ စာကြည့်တိုက်မှူးထံကိုသွားပြီး အဲဒီ ဘီရို ဖွင့်ပေးဖို့ပြောတော့ ကျွန်တော့်ကို အထူးအဆန်းလိုမော့ကြည့်ပြီး သူ့စာကြည့်တိုက်မှူးတစ်သက် အဲဒီ ဘီရိုဖွင့် ခိုင်းတဲ့ဆရာနဲ့ တစ်ကြိမ်မှ မကြုံဘူးသေးကြောင်း ၀န်ခံတယ်။ ကဲ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်က ဆရာတွေရဲ့ အရည်အသွေးတွေကို အကဲဖြတ်နိုင်မယ်ထင်တယ်။ စာမဖတ်တဲ့ဆရာတွေရဲ့ လမ်းညွှန်သင်ပြမှုအောက်မှာ စာမဖတ်တဲ့ကလေးတွေ ထွက်လာတာလည်း "Garbage in, garbage out" သဘောဖြစ်နေလို့ အဆန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာ့ပညာရေးလောကကို creative ဖြစ်တယ်လို့ မပြောနိုင်ဘူး။ ဖတ်စာကိုပုံသေထား၊ ဖတ်စာပဲသင်၊ ဖတ်စာပဲမေး၊ ဖတ်စာထဲကအတိုင်း မဟုတ်ရင် အမှတ်မပေးတဲ့ ပညာရေးစနစ်မှာ creative လည်း ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ ဆရာတွေ ကိုယ်က ဘာမှလုပ်လို့မရ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေမရှိတော့ ကြာလေတုံးလေ၊ သံချေးတက်လေနဲ့ နောက်ဆုံး လွှင့်ပစ်လိုက်ရတော့မယ့် အနေအထားအထားထိဖြစ်သွားအောင် စနစ်တကျများ ဖျက်ဆီးနေကြတာလားလို့ တောင် သံသယပွားမိတယ်။ ဆရာတွေ သုံးမရတော့ တပည့်တွေလည်း တုံးလာတယ်။ ပညာရေးမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမရှိ နှစ်ပေါင်း များစွာ ဒီမိုး ဒီလေ ဒီလူတွေနဲ့ ဒီပြဋ္ဌာန်းချက်စာအုပ်တွေကိုပဲ ပုံသေစွဲကိုင်ထားတယ်။ အရိုးစွဲနေတဲ့သူတွေက လည်း သူ့ခေတ်ကစာ၊ သူ့ခေတ်ကအထာတွေကိုပဲ ကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီး ရှေးခေတ်ဟောင်း အောင့်မေ့ ဖွယ်တွေကိုပဲ ပြန်သင်ခိုင်းနေကြတယ်။ ကွန်ပျူတာခေတ် အိုင်တီခေတ်မှာ ကွန်ပျူတာမကိုင်ဘူးတဲ့ လူကြီးတွေက ကွန်ပျူတာကို အထင်မကြီးတော့ ကွန်ပျူတာနဲ့ ကွင်းရှောင်လို့ရသမျှ ကွင်းရှောင်ပြီး ပညာရေးအလုပ်တွေ လုပ်နေကြတယ်။ ဒီတော့ ကွန်ပျူတာနဲ့ ပညာရေး အလှမ်းဝေးကုန်တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့လွှတ်တော်အထိ ပညာရေးတွင် အိုင်စီတီကို ထိရောက်အကျိုးရှိစွာ အသုံးချရေးဆိုပြီး အဆိုတင်တာ ကို ထောက်ခံကြောင်းပဲ ပြောတယ်။ ဘယ်လိုအကျိုးရှိအောင်သုံးမှာလဲ၊ ဘယ်လောက်အဆင့်အထိ သုံးမှာလဲ၊ ဘယ်သူတွေနဲ့ သုံးမှာလဲ၊ ဘာတွေကိုသုံးမှာလဲ တိတိပပ ထုတ်ဖော်တင်ပြဆွေးနွေးတာ မတွေ့ရဘူး။ လမ်းဖောက်၊ တံတားဆောက်၊ မီးရထားရပ်ဖို့နဲ့ ကားလမ်းပေါ်လှည်းမတက်ရေးလောက်ကို ဆွေးနွေးနေကြတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ် ဆိုတာတွေကိုလည်း စိတ်ပျက်မိတယ်။ လွှတ်တော်နှစ်ကြိမ်ကျင်းပသွားတဲ့အထဲမှာ အိုင်စီတီနဲ့ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်၊ ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် အောင် ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူတွေ တစ်ယောက်မှမရှိဘူး။ ထင်ရှားတာက အိုင်စီတီအကြောင်း၊ အိုင်စီတီနဲ့ နိုင်ငံပြုပြောင်းလဲရင် တိုးတက်မှုမြန်ဆန်ကြောင်း သိသူတွေ လွှတ်တော်ထဲမှာနည်းနေတယ်ထင်ပါရဲ့။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စာမဖတ်တာ အဆန်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့် ပညာရေးဆိုင်ရာ စာအုပ်တစ်အုပ် မကြာ သေးမီက ထုတ်တယ်။ ထုတ်ဝေသူက အုပ်ရေ ၁၀၀၀ (တစ်ထောင်) ထုတ်တယ်တဲ့။ စာပေလောကမှာ အုပ်ရေ ၁၀၀၀ ဆိုတာ bestseller စာရင်းဝင်တဲ့။ မြတ်စွာဘုရား! ကယ်တော်မူပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူဦးရေ သန်း ၅၀ ကျော်၊ ၆၀ နီးပါး။ စာအုပ်ထုတ်ရင် ၁၀၀၀၊ ဂျာနယ်တွေမှာ ၁၀၀၀၀ (တစ်သောင်း) လောက်ရိုက်ရရင် ထိပ်တန်းတဲ့။ နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာတွေလည်း သိန်းဂဏန်းပဲရှိတယ်။ အကြည်တော် ဆိုတဲ့ ဟာသစာရေးဆရာရဲ့စာအုပ်က တစ်ကြိမ်ရိုက်ရင် သောင်းဂဏန်းဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ထက် သာတယ်။ စာမတတ်၊ စာမဖတ်တဲ့သူတွေနဲ့ ပညာရေးဖြင့် ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတည်ဆောက်ဦးမယ် ဆိုတာကတော့ နည်းနည်းလေးလွဲနေပြီထင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပြောချင်တာက - ကလေးတွေကို စာဖတ်နိုင်အောင်လုပ်ပေးကြပါ။ ပြန်ကြားရေးဌာနက စာကြည့်တိုက်တွေ ကျေးရွာ ရပ်ကွက်အထိ လိုက်ဖွင့်ပေးနေတယ်ဆိုပြီး လူကြီးလာမှ စာလာဖတ်ပြတာမျိုး မလုပ်ကြပါနဲ့၊ -စာဖတ်ချင်အောင် အသင်းအဖွဲ့လေးတွေ သူတို့စိတ်ကြိုက်ဖွဲ့စည်းခွင့်ပေးပါ။ အသင်းအဖွဲ့ကို မကြောက်ပါနဲ့။ ဒီမိုကရေစီ အဲဒီကစတာပါ။ ပါတီတွေ အဲဒီကနေစရတာပါ။ တူသူတွေပေါင်းစည်း ခွင့်ကို အစိုးရဆိုတာကြီးနဲ့ မလွှမ်းမိုးထားပါနဲ့ - ကျောင်းတွေမှာ စာကြည့်တိုက်တွေပြန်ဖွင့်ပါ။ စာအုပ်တွေကို update ဖြစ်အောင် အမြဲလုပ်ပါ။ စာကြည့်တိုက်သုံးမှ စာမေးပွဲဖြေနိုင်၊ အမှတ်ကောင်းကောင်းရနိုင်တယ်ဆိုတာကို ဆရာတွေလည်း လက်ခံနိုင်အောင် ပြန်ပြီးလေ့ကျင့်ပါ။ တပည့်တွေလည်း ကျင့်သုံးနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါ။ -ပညာရေးဖြင့်ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာ ပညာရေးမှာ ခေတ်မီအောင်အရင်လုပ်မှရပါလိမ့်မယ်။ အိုင်စီတီ ကို အလျှံပယ်သုံးနိုင်ရေး ကျောင်းတွေမှာ စီစဉ်ပေးပါ။ ကွန်ပျူတာကိုင်ခွင့်ရှိအောင်၊ အင်တာနက် သုံးတတ်အောင် အခွင့်အရေးတွေပေးပါ။ မသုံးရင် မဖြစ်လောက်အောင် သင်ရိုးနဲ့ ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေ ကို ပြင်လိုက်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်။ -မြန်မာ့ပညာရေးစနစ်ဟာ ကြိမ်ဖန်များစွာပြန်သုံးနေတဲ့ ချဉ်ဖတ်အိုးကြီးနဲ့တူနေပါတယ်။ ကဇော် ဖောက်ထားသလို ချဉ်စော်နံပြီး အံချင်စရာကောင်းနေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အဲဒီချဉ်ရေစိမ်အိုးထဲ မှာ ဆရာတွေရဲ့ အနေအထားက ပိုဆိုးပါတယ်။ မြောင်းထဲရောက်နေတဲ့ ဆရာတွေရဲ့ဘ၀ကို ပြန်ဆွဲတင်ပေးပါ။ -ပညာရေးစနစ်တစ်ခုလုံး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမလုပ်ဘဲ ပုဂ္ဂလိကပညာရေးကို ခွင့်ပြုလိုက်ရင် ရရှိလာမယ့်အကျိုးဆက်ဟာ အစိုးရအတွက် အကောင်းတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ပညာရေးကို ချိုးနှိမ်ထားရာကနေ၊ ရန်မဖြစ်တတ်တဲ့ကလေးနဲ့ ရန်ဖြစ်တတ်တဲ့ စွာလန်ကျယ်ကလေးကို ရန်တိုက် ပေးလိုက်ရင် ဘာတွေဖြစ်လာမယ်ထင်ပါသလဲ။ တင်ညွန့် http://thettantcho.grou.ps/talks/6773524 ဒီနေရာမှ ကူးယူပါသည်။
မနေ့ညကပေါ့ .. အလုပ်ကပြန်လာပြီး အိပ်ရာစောစောဝင်ခဲ့တယ် .. ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ အိပ်ပျော်သွားလိုက်တာ … ညသန်းခေါင်လောက်ကျတော့ ကျမ ပြန်နိုးလာပါတယ် … ပြတင်းပေါက်တံခါးက ပွင့်နေတယ် … အပြင်က လရောင်ကြောင့် အစောကြီးရှိသေးတာပဲလို့ ခန့်မှန်းမိတယ် … မနေ့က အလုပ်က ပင်ပန်းလာတာကြောင့် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်ရမှာကို ခု အစောကြီး နိုးလာတယ် … အိပ်ပျော်သွားတာ နာရီပိုင်းလောက်ပဲ ရှိဦးမယ် … ဒါပေမယ့် နိုးလာတော့ လူက လန်းလန်းဆန်းဆန်းကြီး .. ထပ်အိပ်ဖို့ကြိုးစားရဦးမယ် … မဟုတ်ရင် မနက်ဖြန် အလုပ်မှာ ငိုက်နေရလိမ့်မယ် … ဘယ်နှနာရီလဲကြည့်ဦးမှ …
ခုတင်ဘေးက ခုံပေါ်က နာရီကို လှည့်ကြည့်ဖို့အလုပ် …
ကိုယ်တစောင်းလှည့်ဖို့ ကြိုးစားတာမှာ လူက လှည့်လို့မရဘူး .. ကြိုးနဲ့ အထပ်ထပ် ရစ်ပတ်ထားသလိုပဲ … သေချာပါပြီ … သူမကို ကျမ နောက်တကြိမ် ထပ်တွေ့ရပါတော့မယ် …
အဲဒီအမျိုးသမီးပါပဲ … ဒီအိမ်ကိုပြောင်းပြီးကာစနှစ်တွေတုန်းက ၂ကြိမ်လောက် တွေ့ဖူးခဲ့ပါတယ် … သူ့ကြောင့်လဲ အရမ်းကြောက်လန့်တုန်လှုပ်ခဲ့ရဖူးပါတယ် … ဘယ်လောက်ထိလဲဆို ကျမကိုယ်ကျမလဲ ရူးနေပြီလို့တောင် ထင်မိခဲ့တယ် …
ခုလဲ သူနောက်တကြိမ် ပြန်လာပြန်ပါပြီ ... ခုတင်ခြေရင်းဖက်မှာပါပဲ … ခြေသံတွေ တရှပ်ရှပ်ကြားနေရတယ် … အခန်းထဲမှာ ကိုယ်တယောက်ထဲ မဟုတ်ဖူးဆိုတဲ့ အသိက လွှမ်းမိုးနေတယ် …
ခြေသံကြားတဲ့ဖက်ကိုကြည့်တော့ အမှောင်ထဲမှာမို့ သဲသဲကွဲကွဲ မမြင်ရဘူး … အရိပ်တခုလိုပါပဲ … တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အဲဒီခြေသံက ခုတင်ခြေရင်းကနေ ခုတင်ဘေးဖက်ရောက်တာတယ် …
ကြောက်စိတ်ကြောင့် ထွက်ပြေးချင်ပေမယ့် တကိုယ်လုံးက ဆေးတို့ခံထားရသလို တောင့်တင်းနေတယ် … လှုပ်ရှားလို့မရ …
ကြောက်လွန်းလို့ မျက်စိကို မှိတ်ထားမိတယ် … ဒါပေမယ့် အသိအာရုံက ခုတင်ဘေးက တစုံတယောက်က အပေါ်ကမိုးပြီးစိုက်ကြည့်နေသလိုမျိုးကို ခံစားနေရတယ် … ကြောက်စိတ်တွေ လွန်ကဲနေပါပြီ … မျက်စိကိုတော့ မှိတ်ထားတုန်း …
မျက်နှာပေါ် တစက်စက်နဲ့ စေးထန်းထန်း ရေစက်တချို့ကျလာတယ် … မျက်စိဖွင့်မိတယ် …
အပေါ်ကနေမိုးပြီး စိုက်ကြည့်နေတာပါ … ခုန ရေစက်တွေက သူမ ပါးစပ်က ကျလာတဲ့ သွေးစက်တွေ …
ကျမကို စားမတတ်ဝါးမတတ် ကြည့်နေတဲ့အကြည့်တွေက သူမ အရမ်းဒေါသထွက်နေမှန်း သိသာနေပါတယ် … အဲဒီနောက်တော့ ပိုဆိုးလာပြိး လည်ပင်းညစ်ပြီး ကျမကိုအသေသတ်ဖို့ ကြိုးစားလာတယ် … အသက်ရှုတွေ မွန်းကြပ်လာပြီး … အဲဒီနောက်တော့ ကျမ သတိလစ်သွားခဲ့ပါတယ် …
ပုံပြင်ကတော့ ဒါပါပဲ … ဖတ်လို့ကောင်းလားဗျ … သရဲပုံပြင်တော့မဟုတ်ပါဘူး … sleep paralysis ရတဲ့ လူနာတယောက်ရဲ့ အတွေ့အကြုံကို ဆေးပညာဝဘ်ဆိုဒ်တခုကနေ ဘာသာပြန်ပေးထားတာပါ …
အဲဒီလို အဖြစ်ပျက်မျိုးတွေကို ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာ ဇာတ်လမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ တွေ့မြင်တတ်ကြပါတယ် … ဂြိုလ်သားတွေက ဆွဲခေါ်သွားတာတို့ ဆံပင်ဖားလျားနဲ့ အမျိုးသမီးတယောက် ခုတင်ခြေရင်းမှာရပ်ပြီး စိုက်ကြည့်နေတာတို့ … တောကျောင်းက သရဲမွေးထားတယ်လို့ နာမည်ကြီးနေတဲ့ နေရာတွေမှာ သရဲက အိပ်နေတုန်း ခွစီးတာတို့ … နေရာဒေသကိုလိုက်ပြီး ဇာတ်လမ်းကအမျိုးမျိုးပေါ့ …
ဒါပေမယ့် အဲဒီဇာတ်လမ်းတွေ အကုန်လုံးမှာ အခြေခံ တူညီတဲ့အချက်တွေ ရှိပါတယ် … ဥပမာ နိုးလာတဲ့အချိန်တွေမှာ လူက လန်းဆန်းနေတတ်ပါတယ် (အိပ်ရေးမ၀တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဖူး.. အနဲဆုံး နိုးမှန်းသိနေတယ်ပေါ့ဗျာ)၊ မျက်လုံးကလွဲပြီး ခြေလက်တွေ လှုပ်ရှားလို့မရဘူး .. စကားပြောလို့မရဘူး(လေးလေးလံလံ အရာဝတ္တုတခုခုက ဖိပြီးချုပ်ထားသလို ခံစားရတယ်) … တခါတရံ အသက်ရှု မွမ်းကျပ်လာတာမျိုးတွေ ခံစားရတယ် … ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်တတ်တယ် (တစုံတယောက်က စိုက်ကြည့်နေတာကို မြင်ရတာမျိုး) …
နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်သွားတဲ့သူဟာ အိပ်မက်မက်ခဲပါတယ် … အိပ်တ၀က် နိုးတ၀က်အချိန်မှာ အိပ်မက်မက်တာ များပါတယ် … sleep paralysis hallucination (အဲဒီလို မကောင်းဆိုးဝါး မြင်မက်တာမျိုးတွေ) ဖြစ်တာကတော့ အဲဒီ အိပ်တ၀က် နိုးတ၀က်အချိန်နဲ့ နိုးထတဲ့ အချိန်ကြားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ် …
အဲဒါကြောင့် အိပ်တ၀က်နိုးတ၀က် အိပ်မက်တွေ မက်တတ်တယ် … တချိန်တည်းမှာပဲ လူဟာ နိုးထနေတဲ့ အသိကို ခံစားရတတ်ပါတယ် … အဲဒါကြောင့်လဲ အိပ်မက် မဟုတ်တာ သေချာတယ်ဆိုပြီး လက်တွေ့ဘ၀မှာ ဖြစ်ပျက်နေသလိုမျိုး မြင်တွေ့ ခံစားရတာပါ …
အသိစိတ်က နိုးထနေပေမယ့်လဲ ဦးနှောက်ရဲ့ ခနာကိုယ်ကို လှုပ်ရှားအလုပ်လုပ်စေတဲ့ အပိုင်းတွေက အလုပ်မလုပ်သေးတဲ့အတွက် လူက နိုးနေပေမယ့် ခနာကိုယ်က လှုပ်ရှားမရတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ် …
ထုံးစံအတိုင်း စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့သူတွေမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ် … အိပ်ချိန်မမှန် အိပ်ရေးမ၀တဲ့သူတွေမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ် … အိပ်ရာအပြောင်းလဲ ရေမြေဒေသ အပြောင်းလဲမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ် …
တရားထိုင်တာမျိုး ပုတီးစိတ်တာမျိုး စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင် လုပ်ပေးတာမျိုးတွေ လုပ်ပေးသင့်ပါတယ် … တောရဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ သရဲတက်စီးတာကို ပဌာန်းရွတ်လိုက်တော့မှ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပြန်ဆင်းသွားတယ်ဆိုတာမျိုးကလဲ အဲဒီသဘောတွေပါပဲ … ပဌာန်းကို အာရုံပြုပြီး စိတ်တည်ငြိမ်အောင် လုပ်လိုက်တာပါ …
ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်အနေနဲ့ ၃၁ ဘုံမှာ ကျင်လည်ရတဲ့ ဘ၀တွေကို ယုံကြည်ပါတယ် ... သရဲဆိုတာကလဲ ပေတလောကသား ပြိတ္တာတွေပါ ... အောက်ဘုံတွေက ဆင်းရဲငတ်ပြတ်လွန်းတဲ့ ဘ၀တွေပါ ... သူတို့ဘ၀တွေမှာ ပူလောင်စရာတွေအပြည့်နဲ့ ရှိပြီးသားကို အားအားယားယားနဲ့ လူတွေကို လာခြောက်လှန့်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေက တွေးကြည့်ဖို့ကောင်းပါတယ် ... ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား ...
အများစုက ကိုယ့်ဆီက အကူညီတောင်းခံချင်လို့ လာကြတာသာ ဖြစ်ပါတယ် ... တခါတလေ သူတို့နေတဲ့ ဘုံဗိမာန်တွေကို ကိုယ်ကသွားနှောင့်ယှက်လို့ ပြန်တုံ့ပြန်တာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ... ဒါပေမယ့် နေရင်းထိုင်ရင်းတော့ ဘယ်သရဲကမှ လျှာကြီးထုတ်ပြနေစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး ...
မင်္ဂလသုတ်မှာ ဗာဟုသိစ္စဉ္စ သိပ္ပဥလို့ ဟောခဲ့ပါတယ် ... ခေတ်ပညာ သိပ္ပံအတတ်ပညာတွေကို လေ့လာပြီး အမှားမှန် ခွဲခြားဝေဖန်တတ်ဖို့အတွက်ပါ ... ပွင့်လင်းတဲ့ အမြင်ရှိဖို့ပါ ... အရိပ်လိုလို မြင်လိုက်တိုင်း ခြေသံတရှပ်ရှပ် ကြားလိုက်တိုင်း သရဲသရဲထအော်နေလို့ကတော့ ထေရ၀ါဒါအမည်ခံတာဟာ လူရီစရာကောင်းသွားပါလိမ့်မယ် ...
၁။သွာက္ခာတော ဘဂဝတာ ဓမ္မော။
၆။ပစ္စတ္တံ ဝေဒိတဗ္ဗော ဝိညူဟိ။
(၁)။ဘဂဝတာ ဓမ္မော=ရှင်တော်မြတ်ဘုရား ဟောမိန့်ကြားသည့် မဂ်လေးပါး ဖိုလ်လေးပါး နိဗ္ဗာန် ပရိယတ်အားဖြင့် ဆယ်ပါးသော တရားတော်မြတ်သည်၊သွာက္ခာတော=နာစဉ်ချမ်းသာ ကျင့်ချမ်းသာ၍ ချမ်းသာမြတ်မှန် အေးနိဗ္ဗာန်ဟု သုံးတန်ကောင်းခြင်း ပြည့်စုံလျှင်းအောင် ရှင်းလင်း ဟောကြားတော်မူအပ်သော တရားတော်မြတ်ပါပေတည်း။
(၂)။ဘဂဝတာ ဓမ္မော=ရှင်တော်မြတ်ဘုရား ဟောမိန့်ကြားသည့် မဂ်လေးပါး ဖိုလ်လေးပါး နိဗ္ဗာန်အားဖြင့် လောကုတ္တရာကိုးပါး မြတ်တရားသည်၊သန္ဒိဋ္ဌိကော=သူများပြောကြား စကားနှင့်မျှမယုံရဘဲ ကျနကိုင်တိုင် သိမြင်နိုင်သော တရားတော်မြတ်ပါပေတည်း။
(၃)။ဘဂဝတာဓမ္မော=ရှင်တော်မြတ်ဘုရား ဟောမိန့်ကြားသည့် မဂ်လေးပါးတရားတော်မြတ်သည်၊အကာလိကော=အချိန်မလင့် မဖင့်မနှေး ချက်ချင်းအကျိုးပေးသော တရားတော်မြတ်ပါပေတည်း။
(၄)။ဘဂဝတာ ဓမ္မော=ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောမိန့်ကြားသည့် လောကုတ္တရာကိုးပါး မြတ်တရားသည်၊ဧဟိပဿိကော=လာခဲ့စမ်းပါ၊ ရှု့စမ်းပါဟု ဝမ်းသာရွှင်လှိုက် ဖိတ်ခေါ်ထိုက်သော တရားတော်မြတ်ပါပေတည်း။
(၅)။ဘဂဝတာ ဓမ္မော=ရှင်တော်မြတ်ဘုရား ဟောမိန့်ကြားသည့် လောကုတ္တရာကိုးပါး မြတ်တရားသည်၊သြပနေယျိကော=အဝတ်ဥသျှောင် မီးလောင်သော်လည်း မသတ်ပဲနှင့် စိတ်ထဲရောက်အောင် ကပ်ဆောင်ထိုက်သော တရားတော်မြတ်ပါပေတည်း။
(၆)။ဘဂဝတာ ဓမ္မော=ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောမိန့်ကြားသည့် လောကုတ္တရာကိုးပါး မြတ်တရားသည်၊ဝိညူဟိ=သစ္စာသိမြင် ပညာရှင်ရှစ်ပါး အရိယာများသည်သာလျှင် ၊ပစ္စတ္တံဝေဒိတဗ္ဗော=ကိုယ်စီကိုယ်ငှ သိရ ခံစားရသော တရားတော်မြတ်ပါပေတည်း။ ဤသို့လျှင်သွာက္ခာတ စသား ဂုဏ်တော်ခြောက်ပါးနှင့်ထူးခြားကုံလုံပြည့်စုံတော်မူသော တရားတော်မြတ်ကို ဘုရားတပည့်တော်သည် ကြည်ညိုမြတ်နိုး လက်စုံမိုး၍ ရှိခိုးကန်းပါ၏ အရှင်ဘုရား။
မြတ်စွာဘုရားရှင် ဟောပြော ညွှန်ပြတော်မူသော တရားတော်များသည် သူတစ်ပါးထံမှ သင်ယူနာကြားထားသော တရားတော်များကို ပြန်လည်ဟောကြားသော တရားတော်များ မဟုတ်ပေ။မိမိ၏ အတွေးအခေါ် ဆင်ခြင်ဥာဏ်ဖြင့် တွေးခေါ်ကြံဆ ဆင်ခြင်၍ရသော တရားတော်များကို ပြန်လည်ဟောကြားထားခြင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အမှန်စင်စစ် ကိုယ်တိုင် အကျင့်လမ်းမှန်ကို ကျင့်ပြီး ကိုယ်တွေ့ဥာဏ်ဖြင့် ထိုးထွင်း သိမြင်ထားသော တရားတော်များကိုသာ ပြန်လည်ဟောကြားတော်မူခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
တရားဂုဏ်တော် ပွားများရခြင်းအကျိုး။ ။တရားဂုဏ်ပွား၊ အကျိုးများ၊ မှတ်သား သိစေမည်။တရားရှင်ဖြစ်ငြား၊ မြတ်ဘုရား၊ လေးစားရိူသေသည်။သတိ သဒ္ဓါ၊ ပညာပုည၊ ပြန့်ပြောစွ၊ ဖြစ်ရထင်ရှားသည်။ နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်၊ ဘေးမကြောက်ပေ၊ ဒုက္ခတွေ၊ မသွေသည်းခံသည်။ တရားတူနေ၊ ပူဇော်တွေခံ၊ မဂ်ရရန်၊ စိတ်ကြံညွတ်လေသည်။ ရှက်ကြောက်-ထင်ရှား၊ ကောင်းရာလား၊ ကျိုးများရနိုင်သည်။(အရှင်ကောဝိဒဓဇ)
ကိုးကား၊ ။ချမ်းမြေ့ဆရာတော်(လူငယ်သင် ချမ်းမြေ့ အခြေပျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာစာအုပ်)မှ ကောက်နှုတ်တင်ပြလိုက်ပါသည်။ အားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။
Watch this and you will never play guitar again :P
I will NEVER EVER play guitar again after watching this kid playing ... :(
ဘိုးဘိုး မနေ့ကလေ ဘိုးဘိုးပြောတယ်မလား သိုက်ချုပ်ဘိုးတော်ကြီး ဆိုတာ သူ့ကိုဘယ်သူက ခန့်တာတုန်း ၊ တရားဝင်ခန့်တာလား ဆွဲခန့်လား ၊ အိုး တရားဝင်ခန့်တာပေါ့ကွယ် ၊ သိုက်ချုပ်ဘိုး တော်ကြီးကို ၊ ကမ္ဘာရဲ့ မြောက်ဘက်ခြမ်းကို စောင့်ရှောက်တော်မူတဲ့ ၊ ကုဝေရ နတ်မင်းကြီးက ခန့်အပ်ထားတာ သိုက်ချုပ်ဘိုးတော်ကြီး ဆိုတာလဲ စတုမဟာဇရာဇ် နတ်စာရင်းဝင်တဲ့ နတ်ပါဘဲ ဘာလို့ခန့်အပ်ရသလဲ ဆိုရင် ၊ မနေ့က ပြောခဲ့တယ်လေ ဘုရားတည်ပြီးသွားရင် ကျောင်းတွေ ဆောက်ပြီးသွားရင် ဘုရင်တွေဟာ မြေအတွင်းမှာ အသုံးကံကြွေးချတဲ့အခါ ၊ ထောင်နှစ်ကြီးသမား ကို မင်းတို့ ဒီဥစ္စာတွေကို စောင့့််ရှောက်ကြ ၊ ဘုရားမပြိုမပျက်ခြင်း ကျောင်းမပြိုမပျက်ခြင်း ဘယ် သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ တူးဖော်ယူငင်လို့မရစေနဲ့ ၊ တူးယူသွားတဲ့ လူတွေလဲ ဘုရားကျောင်းကံ စေတီပုထိုး မပြုပြင်ဘဲ စားသောက်သုံးယူခဲ့သော် ၊ ကမ္ဘာမြေရဲ့ သဲလုံးနဲ့ အမျှငရဲမှာခံရပါစေလို့ ကျိန်စာ တိုက်ခဲ့ပြီး ခုနက နှစ်ကြီးသမားတွေကို သတ်ဖြတ်ပြီး အစောင့်ထားခဲ့တယ် ၊အဲဒီ အစောင့်တွေဟာ အစိမ်းသေရတော့ နတ်ပြည်မရောက်နိုင်ဘူးကွယ် မင်းပြစ်မင်းဒဏ်နဲ့ မချိမဆန့် သေရတာဖြစ်လို့ ၊ သူတို့ဟာ အစိမ်းသရဲ ပြိတ္တာကြီးတွေ အဲလိုတွေဖြစ်ပြီး ဒီဥစ္စာတွေကို စောင့်ရတယ် ဘုရင်က စောင့်ဆိုလို့သာ စောင့်ရရှာတယ် သူတို့က ဘာအတွက် ဘယ်အတွက် ဆိုတာ မသိဘူး ဒါကြောင့် သရဲသဘက် ပြိတ္တာ စတာတွေကို နိုင်နင်းတဲ့ အထက်လော်ကီ ပညာဆရာကြီးများက ထိုိုထိုသိုက်တွေကို တူးယူတယ် အဲလိုတူးယူုတော့ ဘုရားစေတီတွေရဲ့ ဘဏ္ဍာတွေ ဆုံးရှုံးလို့မို့ ၊ စတုမဟာရာဇ်နတ်မင်းကြီး ကုဝေရက ထိုထိုသိုက်တွေကို စီမံအုပ်ချုပ်ဖို့ စာရင်းဇယား လုပ်တဲ့ သိုက်ချုပ်ဘိုးတော်ကြီးတစ်ပါး ခန့်အပ်လိုက်တယ် ၊ ဒီနေရာမှာ မြေးကို ကျိန်စာ ဆိုတာပြောအုံးမယ် သိင်္ဃာသူ့ သမီးကျောက်စာတို့ ၊ မိဖုရားဖွားစော ကျောက်စာတို့ ၊ ပုဂံမြင်းကပါ အရပ်က မြစေတီကျောက်စာ တို့မှာတောင် “ငါရဲ့ အလှူကို ဖျက်ဆီးသူများ ဘုရားဖူးခွင့် မကြုံရပါစေနဲ့ ၊ ပြုပြင်သူများ သူတို့နဲ့ တူတူ အရိမေတ္တယျ မြတ်စွာဘုရားကို ဖူးရပါစေ ” စသဖြင့် ရေးသားပြီး ကျောက်စာထိုးခဲ့တယ် ၊ အဲဒါကျိန်စာဘဲကွယ် ၊ ယဉ်ယဉ်လေးနဲ့ ကျိန်စာတိုက်ခဲ့တာ ။
ဘိုးဘိုးသိုက်တူးဖူးတယ်နော် ဟုတ်ပ ၊ သိုက်တစ်ခု တူးမယ်ဆိုရင် မြေပုံလိုတယ်မဟုတ်ဘူးလား ၊ မြေပုံမဟုတ်ဘူးကွယ် သိုက်စာပါ ၊ အင်း အဲဒီသိုက်စာကို ဘိုးဘိုးတို့က ဘယ်ကရတုန်း ၊ အင်း ဒါက ဘိုးဘိုးတို့နဲ့ မဆိုင်ဘူးကွယ် ၊ ဘိုးဘိုးတို့က နောက်လိုက် ဘိုးဘိုးရဲ့ ဆရာသမားတွေ ရှိတယ် သူတို့ကဆီမှာ ရှိတာပေါ့ ၊ သူတို့က ဘယ်ကရတုန်း အင်းသိုက်စာ ဆိုတာက တချို့က ပြိုပျက်သွားတဲ့ ဘုရားစေတီတွေထဲက ရတယ်ကွယ် ၊ တချို့ဟာတွေကတော့ သိုက်တူးရင်း သိုက်ထဲက ရတနာတွေအပြင် သိုက်စာတစ်ခုပါ တစ်ပါတည်းရခဲ့တယ်၊ တချို့ကတော့ စကားဟောင်းနဲ့ သိရတယ် ၊ ဘိုးဘိုးရဲ့ဆရာသမားကြီးဟာ ၊ ဦးသိဒ္ဓိဗလတဲ့ ရခိုင်လူမျိုးကြီး ၊ သူ့ရဲ့ အဆက်အနွယ်တွေက ရခိုင်ဘုရင် မင်းဆက်တွေက ဆင်းသက်လာတာ ၊ စာပေဆိုတာ အင်မတန်နှံ့စပ်တယ် ၊ သူ့မှာ သိုက်စာတွေကတော့ ပုံလို့ ၊ သူကရှိတယ်ဆိုတဲ့ နေရာကို ဘိုးဘိုးတို့က သူနောက်လိုက်ပြီး သူခိုင်းတာလုပ်ရတာဘဲ ၊ တချို့သိုက်စာတွေက ဘယ်လောက်တိကျသလဲဆိုရင် ဘယ်မြို့ ဘယ်ရွာ ဘယ်ဘုရား အဲလိုလိပ်စာမှာ အတိအကျပါတယ် ၊ အဲနေရာတွေကို ဆရာကြီးရောက်တောင် မရောက်ဖူးဘူး တပည့်တွေကို ငွေပေးပြီးလွှတ်ကြည့်ခိုင်းတယ် ၊ သူပြောတဲ့ နေရာမှာ သူပြောတဲ့ အမှတ်အသားတွေရှိတယ် ကျိန်းသေပြီ ဆိုမှ သူကပါလိုက်လာပြီး သိုက်တူးဖို့လုပ်ကြတယ် ။
အဲဒီကာလမှာ ဟိန္ဒူဝါဒီ ကသည်းတွေ တော်လှန်ပုန်ကန်တာရယ် ၊ အောက်ပြည်တစ်လွှားက မွန်တွေထကြွတာရယ် ၊ အယုဒ္ဓယဘက်က ပုန်ကန်တာရယ်တွေကြောင့် မင်းဆရာ နတ်စက် ရောင်ဟာ စစ်တိုက်ဖို့ ပြင်ဆင်နေရတဲ့ တနင်္ဂနွေမင်းအတွက် စေတီပုထိုး ဘုရား ကျောင်းကန်တွေ အတွက် သိုက်စာ ရေးသားခဲ့ တယ် ၊ နောက်ပြီး နတ်စက်ရောင် ဆရာတော်ဟာ ဟံသာဝတီထီးနန်းကို မွန်တွေသိမ်းပိုက်မှာကို ကြိုတင်သိရှိတဲ့အတွက်၊ ဘုရင်မင်းတရားကြီးရဲ့ လက်စ မပြတ်သေးတဲ့ ကောင်းမှုတော်တွေ အတွက် မြေတွင်းမှာ ရတနာတွေ ထားခဲ့ပြီး ၊ သိုက်စာ ရေးသားတော်မူခဲ့တယ် ၊ နောက်သိုက်စာ တစ်မျိုးရှိသေးတယ် အဲဒါကလဲ နတ်စက်ရောင် ဆရာတော်ဘဲရေးခဲ့တာ သူကတော့ နန်းဆက်သိုက်စာလို့ နာမည်ကြီးတယ် ၊ “သစ္စာအကျင့်မှန် ကုသိလ သစ္စံတမန် အစောင့်ထား မုဆိုး တစ်ကျိပ်ငါး”ဘိုးဘိုး အဲဒါက ဘာကြီးတုန်း အဲဒါက ကုန်းဘောင်မင်းဆက်တွေ့ရဲ့ နေ့နံတွေလေကွယ် ၊ သ ဆိုတာ သောကြာ ကုန်းဘောင်မင်းဆက်ကို တည်မဲ့ အလောင်းမင်းတရားကြီး ဦးအောင်ဇေယျဟာ သောကြာသားကွယ် ၊ စ္စာ ဆိုတာအင်္ဂါကွယ် သူ့နောက် နန်းတက်တဲ့ နောင်တော်ကြီးမင်း ကအင်္ဂါသားကွယ် နာမည်က (မောင်လောက်တဲ့ ) “အ”ဆိုတာ ကတော့ တနင်္ဂနွေကွယ် ၊ နောင်တော်ကြီးမင်းရဲ့ နောက်မှာ နန်းတက်မဲ့ ဘုရင်က မြေဒူးမင်းတဲ့ နာမည်က မောင်ရွ တဲ့ တနင်္ဂနွေသားပါကွယ် ၊ နာမည်နဲ့ နေ့နံမအပ်တာပါ ၊ ကျင့် ဆိုတာက တနလာင်္ပါကွယ် ၊ ငစဉ့်ကူးမင်းရဲ့ နေ့နံပေါ့ သူ့ငယ်နာမည်က မောင်ရဲလှကွယ် ၊ မှန် ဆိုတာက ကြာသပတေးကွယ် အဲဒီမင်းနောက် နန်းတက်တဲ့ ဖောင်းကားစားမင်း လို့နာမည်ကြီးတဲ့မင်း ပေါ့။ နာမည်က မောင်မောင်တဲ့ကွယ် ၊ ကု ဆိုတာတနလာင်္ပေါ့ ဗဒုံမင်းလဲ ခေါ်တယ် ဘိုးတော်ဘုရား လဲခေါ်တယ် ဘုရင်ရဲ့နာမည် ငယ်နာမည် မောင်ဝိုင်း တန လာင်္သားပါကွယ် ၊ သိ ဆိုတာ သောကြာကွယ် ဘကြီးတော်မင်း သို့မဟုတ် ဖန်နန်း ရှင်ခေါ်တဲ့မင်းပေါ့ သူက သောကြာသား ငယ်နာမည်က မောင်စိန်တဲ့ကွယ် ၊ ဘိုးဘိုးဟာက နာမည်တွေနဲ့နေ့နံတွေနဲ့ ကိုက်လဲမကိုက်ဘူး။ ကိုက်ရင် ဘုရင်ဘယ်ဖြစ်တော့မလဲကွယ် ၊ သိုက် စာက သက္ကရာဇ် ၁၀၉၅ ခုနှစ် အင်းဝခေတ် မဟာဓမ္မရာဇာဓိပတိမင်း လက်ထက်မှာ ရေးခဲ့တာတာကွယ် ၊ ဘုန်းဘောင်မင်းဆက်ကို စတည်ထောင်တာ “ဥသြတွန်မည်” ကုန်းဘောင် တည် ဆိုတဲ့ တဘောင်အရ ၁၁၀၅ခုနှစ်မှာ ဒါက မှားတယ်ကွယ် ၊ ကုန်းဘောင်တည်ထောင်တာ သက္ကရာဇ် ၁၁၀၄ခု ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကုန်းဘောင်ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ အလောင်းမင်း တရားကြီး ဦးအောင်ဇေယျ တည်ခဲ့တဲ့ ရွှေချက်သို စေတီကျောက်စာမှာ သက္ကရာဇ် ၁၁၀၄ခုမှာ ရတနာသိင်္ဃမြို့ကို တည်တော်မူ၍ ၁၁၁၄မှာ နန်းတက်တော်မူသော အလောင်းမင်းတရားကြီး ကောင်းမှုတော်လို့ ကျောက်စာထိုးထားတယ်ကွယ် ၊ ခုနက စကားပြတ်သွားအုံးမယ် ပြန်ပြောအုံး ဘိုးဘိုးကလဲ ဘာလို့ဘုရင်တွေက နာမည်နဲ့ နေ့နံမကိုက်တာတုန်း လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တစ်ရာကျော်က ရေးခဲ့တဲ့ သိုက်စာက တိတိကျကျမှန် နေတော့ ဘုရင်တွေက သားမွေးတာနဲ့ နာမည်တစ်ခြား နေ့တစ်ခြားမှည့်လိုက်တယ် ၊ တော်ကြာ မင်းလောင်းဆိုပြီး ငယ်စဉ်ကတည်း ဖျောက်ဖျက်ပြစ်မှာ ဆိုးလို့ကွယ် ၊ ဘကြီးတော်မင်းပြီးတော့ သိုက်စာမှာ လ အက္ခရာဟာ ဗုဒ္ဓဟူးလို့ ဆိုလိုတယ် ၊ သာယာဝတီမင်းကို ဆိုလိုတာကွယ် သာယာဝတီမင်းသားက ဗုဒ္ဓဟူးသားကွယ် ငယ်နာမည်က မောင်ခင်တဲ့ ၊ သစ္စံက သ အက္ခရာက သောကြာ ကိုညွှန်းတာကွယ် ၊ သာယာဝတီမင်းနောက် နန်းတက်မဲ့ ပုဂံမင်းကွယ် သောကြာသား နာမည်က မောင်ထောင်တဲ့ ၊ စ္စံ ဆိုတာက အင်္ဂါကိုဆိုလိုတယ် ပုဂံမင်းနောက် နန်းတက်ခဲ့တဲ့ မင်းတုန်း မင်းတရားကြီးဟာ အင်္ဂါသားပေါ့ ၊ နာမည်က မောင်လွင်တဲ့ ၊ တ အက္ခရာကတော့ စနေနံ ကိုဆိုလို တာပါ ၊ မင်းတုန်းမင်းကြီးနောက် နန်းတက်မဲ့ သီပေါဘုရင်လေးဟာ စနေသားပေါ့ကွယ် ငယ်နာမည် မောင်ရေစက်တဲ့ ၊ ဒါကြောင့်ဘုရင်တွေရဲ့ နန်းဆက်နဲ့ နန်းသက် ကိုသိရအောင် ၊“သားမြတ် အစစ် သုံးနှစ်စစ်ကိုင်း၊ဆင်ဖြူတိုင်းမှာ ဆယ့်သုံးနှစ်သာ၊သားသည်ခြောက်နှစ် စဥ့်ကူးဖြစ်၍၊ ရက် သစ်ခွန်ကား ဖောင်းကားစား၊ ဘိုးတော် သုံးခွန် ၊မှန်ရှင်ဆယ့်ရှစ် ၊ ကိုးနှစ် သာယာဝတီ ၊ပုဂံသည် ခြောက်၊နှစ်ဆယ့်ခြောက် တုန်း(မင်းတုန်း) ၊နန်းဆုံးခွန်နှစ် သီပေါဖြစ်၏” လို့ ရှေးပညာရှိများ နန်းဆက်နဲ့ နန်းသက်ကို ဒီလိုရေးထားခဲ့ကြတယ် ။
ဒီသိုက်စာ အရဆိုရင် ကုန်းဘောင်မင်းဆက်က ၁၅ဆက်ပေါ့ အေးပေါ့ကွဲ့၊ ဟင် ၁၁ဆက်တည်းပါ ဘိုးဘိုးကလဲ သားတို့ စာထဲမှာ ပါတယ်လေ ဘိုးဘိုးပြောတာလဲ ၁၁ပါးဘဲဟာကြီး သိုက်စာမှားတာ မလား ဘယ်ကသာကွယ် သိုက်စာဟာ အစစ်အမှန်ဆို မှားရိုးမရှိဘူးကွဲ့ ဘိုးဘိုးကိုယ်တွေ့ တွေများပေါ့ ၊ ဒါဆိုကျန်တဲ့ လေးပါးဘယ်မှာတုန်း အင်း သီပေါမင်းအထိ ၁၁ခုနော် ၊ မာန် အစောင့် ထား ဆိုတာ ကျန်နေတယ်မို့လား အဲဒီထဲက မာန်ဟာ ကြာသပတေးကို ကိုယ်စားပြုတယ်ကွယ် အင်္ဂလိပ်ခေတ်မှာ ဘုရင်ခံဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာဘမော်ဟာ ကြာသပတေးသား ၊ အဆိုတာ တနင်္ဂနွေသားဗိုလ်ချုပ် ကိုဆိုလိုဟန်ရှိတယ် ၊ စောင့် ဆိုတာကတော့ အင်္ဂါသား သမ္မတကြီး စ၀်ရွှေသိုက်တဲ့ ၊ ထားဆိုတာက စနေသားကြီး သမ္မတကြီးမဟာသရေစည်သူ စောဘဦး ကိုဆိုလိုတာ၊ ဘိုးဘိုး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ထိန်လင်းလေ စနေသားမဟုတ်လား မဟုတ်ပါ ဘူးကွယ် ၊ စနေနေ့ညမှာ မွေးတာပါ ၊ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ဇာတာကို မန္တလေးက ဖလိတစိန္တာ ဆရာကြီး ဦးဘိုထွေး စစ်ပေးထားတာ ရှိပါတယ် ၊ ၁၉၁၅ ခု ဖေဖော်ဝါရီ၁၃ရက် မြန်မာသက္ကရာဇ်၁၂ရ၆ တပေါင်းလဆန်း ၁ရက် စနေနေ့ညမှာ မွေးတာပါ ဒါကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်ဟာ တနင်္ဂနွေသားပါကွယ် ၊ ဘိုးဘိုးဆရာက လွတ်လပ်ရေး မရခင် ၂နှစ်အလိုမှာ ဆုံးတယ် ၊ သူကမသေခင် စကား စပ်မှိရာကနေ ဗိုလ်ချုပ်ဟာ တိုင်းပြည်မအုပ်ချုပ်ရဘူး နောင် တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မဲ့ လူဟာ အင်္ဂါသားလို့ ပြောသွားတယ်ကွယ် ၊ လွတ်လပ်ရေး ရတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပဋ္ဌမဦးဆုံး သမ္မတ ကြီးဟာ စ၀်ရွှေသိုက်ဖြစ်လာတယ် ၊ သူကဘုရင်လဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ အော်ခက်ကုန်ပြီကွယ် ၊ တိုင်းပြည် အုပ်ချုပ်တဲ့ လူဆိုတာက မင်းပါဘဲကွယ် ၊ လောကသမ္မုတိ မင်းပေါ့ ဟိုလိုအဆောင်ယောင်တွေနဲ့ မင်းတော့မဟုတ်ဘူး ၊ ငါ့မြေးမမြင်ဖူးလို့ အရင်ကသမ္မတကြီးတွေ ကြွလာရင် သူ့နောက်မှာ စည်တော်ရွှမ်းတဲ့ လူတို့ ၊ ထွေးခံ သယ်တဲ့လူတို့ ပါတယ် ၊ မြန်မာနိုင်ငံတက်လာတဲ့ သမ္မတ အဆက်ဆက်ဟာ သိမ်ဖြူ ဆရာတော်ကြီးကိုကိုးကွယ်တယ် ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာကနေ ကူးပြောင်းလာတဲ့ သမ္မတကြီး မန်းဝင်းမောင်တောင် သိမ်ဖြူဆရာတော်ကြီးကို ဆည်းကပ် ကိုးကွယ်တယ် ၊ ဒါဆို သမ္မတကြီး မန်း ၀င်းမောင်က သိုက်စာထဲမပါဘူးပေါ့ အေးပေါ့ကွယ် ၊ ဒါကြောင့်သူ့လက်ထက်မှာ တိုင်းပြည်က မောက်ကမ ဖြစ်ကုန်တာပေါ့ ၊ ဒါကြောင့် သိုက်စာမှန်ရင် မှားရိုးမရှိလို့ ဆိုတာပေါ့ကွယ် ၊ အဲဒီသိုက်စာကို ရေးခဲ့တဲ့ ခေတ်တုန်းက လမိုင်းဝန်ဆိုတာ မရှိဘူးကွယ် ၊ လမိုင်းဝန်ဆိုတာ ကုန်းဘောင်ခေတ်ကြမှ ခန့်အပ်ကြတာ ၊ မဟာဓမ္မ ရာဇာဓိ ပတိမင်း လက်ထက်မှာ အင်းဝပျက်သမို့ တည်ထားခဲ့တဲ့ စေတီပုထိုး ဘုရားကျောင်းကန်တွေ အတွက် နတ်စက်ရောင် ဆရာတော်က သိုက်စာများစီမံခဲ့တယ် ၊ နောင်လူတွေဟာ နတ်စက်ရောင် ဆရာတော်ရေးခဲ့တဲ့ သိုက်စာမို့ နတ်စက်ရောင်သိုက်စာ လို့ခေါ်ကြတယ် ။
ဘိုးဘိုးတို့ တစ်တွေတည်းခဲ့တာက ဘုန်းကြီးကျောင်း စစ်ကွင်းကျောင်းလို့ ခေါ်တယ် အဲဒီ ဆရာတော် ကလဲ လောကီပညာတွေ တတ်တယ် ၊ အဲဒီကျိုက်ဒေးယျုံ ဘုရားကြီးရဲ့ အ နောက်မှာ အဲဒီကျောင်းရှိတယ် ၊ အခုထိရှိနေသေးတယ် ၊ အဲဒီဘုန်းကြီးနဲ့ ဘိုးဘိုးဆရာနဲ့ ဆိုရင် ဘိုးဘိုးဆရာက ပညာပိုမြင့်တယ် ၊ ဒါနဲ့ သိုက်ကတူးပြီလား ဘယ်လိုတူးတုန်း အယ် မြေးရယ် တူးလို့ချက်ချင်းမရပါဘူး ၊ အဲဒီမြို့မှာ ရှိတဲ့ အစောင့်အရှောက်တွေကို ဆင့်ခေါ်ရ တယ် ၊ ဘယ်လိုခေါ်တုန်း အော် ဂါထာတွေ မန္တရားတွေ ပွဲတွေနဲ့ ခေါ်တာပေါ့ ၊ အဲဒီစစ်ကွင်း ကျောင်း ဆ၇ာတော်က ဘီလူးကြီးတစ်ကောင် မွေးထားတယ် ၊ သူ့ကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တာ ဆရာက၊ ဟင် ဘီလူးကြီးကိုဘယ်လိုမွေးတုန်း ၊ မသိပါဘူးကွယ် ဘိုးဘိုး တကယ် မြင်ခဲ့ရ တယ် ၊ အဲဒီဘီလူးကို ရာမာယန ဇာတ်ထဲက ဘီလူးလိုလား ဘိုးဘိုး ၊ ဟုတ်ပါဘူးကွယ် ဘာဦးထုပ်မှ မပါပါဘူး လူလိုပါဘဲ ၊ အမွှေးရှည်ကြီးတွေနဲ့ ညဘက် ကျောင်းပေါ် လမ်း လျှောက်နေတာဘဲ ၊ ဘိုးဘိုးတို့ကို မစားဘူးလား စားလို့မရဘူး ဆရာက ဘိုးဘိုးတို့ကို တောင် စောင့်ခိုင်းထားသေးတယ် သူ့ကို နောက်နေ့မနက်မှာတော့ ဆရာက ပြောတယ် သိုက်က ဒီဒေးဒရဲနဲ့ အရှေ့ဘက်လေးမိုင်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့ ရွာမှာတဲ့ ရွာနာမည်က သင်ပေါင်းချောင်လို့ ခေါ်တယ်၊အဲဒီမှာ သိုက်ရှိတယ် လို့တိတိကျကျသိရတယ်၊ ဘယ်လို သိလဲ ဘိုးဘိုးရဲ့၊ ညက သိုက်စောင့်တွေကို ခေါ်စစ်လိုက်တာပေါ့၊ သူတို့က ပြောရောလား ပြောတယ်လေ ၊ အဲဒီသိုက်နန်းရှင် မိန်းမက ရန်ကုန်သိမ်ကြီးဈေးမှာ ဈေးရောင်းနေတဲ့ လူ တဲ့ဗျာ သိုက်နန်းရှင်ဘ၀ကနေ လူသွားဖြစ်နေတာတဲ့ ။
“ဟင်”တကယ် ဟုတ်တယ်မြေးရဲ့ ၊ အဲဒီညက ဆိုင်ရာပိုင်ရာတွေကို ဆရာကခေါ် စစ်လိုက်တော့ အကုန်ပြောပြတယ် ၊ အဲဒီသိုက်မှာ သိုက်နန်းရှင်က လူဖြစ်နေလို့ သိုက်မှာ သရဲကြီးတွေဘဲ ကျန်ခဲ့တယ် ၊ ဆရာနဲ့ ဘိုးဘိုးတို့က စစ်ကွင်းကျောင်းဘုန်းကြီးရဲ့ စာနဲ့ သင်ပေါင်းချောင်ရွာကို သွားကြတယ် ၊ အဲဒီရွာမှာလဲ ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိတယ် သင်ပေါင်း ချောင်ကျေးရွာကျောင်းပေါ့ ၊ သိုက်က အဲဒီကျောင်းရဲ့ ခေါင်းရင်း မြသိန်းတန်လို့ ခေါ်တဲ့စေ တီတည်မဲ့ နေရာမှာ ရှိတယ် ၊ ဘုန်းကြီးကို ဆရာက မြသိန်းတန် စေတီလေး တည်ချင်လို့ ပါလို့လျှောက်တော့ ဘုန်းကြီးက ဆ၇ာ့ကိုဘယ်နားမှာ တည်ချင်လဲလို့ မေးတယ် ၊ ဆရာက သိုက်ရှိမယ် ထင်တဲ့ နေရာကို ပြပြီးမြေတောင်းတယ် ၊ ဘုန်းကြီးက ဘိုးဘိုးတို့ သိုက်တူးမယ်ဆိုတာ မသိကြဘူး ၊ ရိုးရိုးသားသား ထင်ပြီး အသာတကြည်ဘဲ မြေပေးတယ် ၊ မြေပေး တဲ့နေရာမှာဘဲ ဆရာက ညဘက်သိုက်နေရာ သတ်မှတ်လိုက်တယ် ၊ သိုက်ပတ်ပတ် လည် မှာ ၊ ဆန်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ ပေါက်ပေါက်ဆုပ်လေးတွေကို ကြဲထားလိုက်တယ် ၊ ပြီးတော့ ဆေးနွား ဆိုတဲ့ အင်းတွေ ဆေးတွေနဲ့ စီမံထားတဲ့ ရွံ့ရုပ်နွားလေးတွေနဲ့ အဲဒီနားမှာ ချထားခဲ့ရတယ် ၊ “ဆေးနွားက ဘာလုပ်တာလ”ဲ အော်ကွယ် အဲဒါက ဒီသိုက်ကို တူးလို့ ရမရ ပညာ စမ်းလိုက်တာ ၊ ဒီသိုက်ထဲက အစောင့်အရှောက်တွေကို အခုဘိုးဘိုးရဲ့ ဆရာက နိုင်မနိုင် တူးလို့ရမရ အဲဒါစမ်းသပ်တာ ၊ ဘယ်လိုဖြစ်လဲ နိုင်မယ်ဆိုရင်၊ နိုင်မယ်ဆိုရင် အဲဒီနွားရုပ်လေးက မိုးလင်းရင် ဦးချိုမှာ သွေးစသွေးန ဒါမှမဟုတ် ရွှေရောင် ငွေရောင် ထနေတယ် ၊ မနိုင်ဘူးဆိုရင် အဲဒီနွားလေးရဲ့ ဂျိုဟာ တုန်းတိတိ ကျိုးသွားတယ် ၊ ဒါဆို ဒီသိုက်ကို တူးလို့မရဘူး ၊ အခုဘယ်လိုနေတုန်း၊ အခုတူးလို့ရမယ်လို့ ဆရာက ဆိုတယ်ကွယ် ၊ ဒါက ကုန်းသိုက်မို့လို့ ဆေးနွားနဲ့ စမ်းသပ်ရတယ်ကွယ် ၊ ရေသိုက်ဆိုရင် ဘဲရုပ်လေး လုပ်ရတယ် ၊ဆေးဘဲလို့ခေါ်တယ် ၊ အဲလိုဘဲ ဆေးဘဲလေးလုပ်ပြီး ရေထဲကို ချထားလိုက်ရင် မိုးလင်းလို့ ကိုယ်ချတဲ့နေရာကို ပြန်ရောက်မလာဘူး ဆိုရင်တော့ ဒီသိုက်ဟာ သာသနာတော်ဆိုင်ရာ သိုက်ဘဲကွယ် ၊ တူးယူလို့မရဘူး ။
Credit goes to သရဲအကြောင်းပြောကြမယ် (ပေတလောကကိုစိတ်ဝင်စားသူများ)
အဖိုးပြောတဲ့ သိုက်အကြောင်း ၁
မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်ကို သိုက်ဆိုတာ တကယ်ရှိသလား ၊ ဥစ္စာစောင့် ဆိုတာရော တကယ်ရှိ သလားလို့ မေးမှိရင်တော့ ဟုတ်ကဲ့ ရှိပါတယ် ၊ ဟင့်အင်း ဒါတွေမရှိပါဘူး ၊ အင်းရှိတယ် လဲမဟုတ် မရှိဘူးလို့လဲ ပြောလို့မရပါဘူး ၊ လူတွေက ရှိတယ်လို့တော့ ပြောဆိုနေကြပါတယ် ၊ အဲလိုပြောဆို တတ်ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ် ၊
ဟုတ်ပါတယ် သိုက်တို့ ဥစ္စာစောင့်တို့ တကယ်ရှိတယ် မရှိဘူးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရတာဟာ အင်မတန်မှ လက်ဝင်ပါတယ် ၊ ဒီကိစ္စများဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အတွက် အရေးကြီးသော ကိစ္စများတော့မဟုတ်ပါ ၊ သို့သော် ဗဟုသုတ အနေဖြင့် ငယ်စဉ်က ကျွန်တော့ကို ပြောပြတဲ့ အဘိုးရဲ့ အိပ်ယာဝင်ပုံပြင်လေး တွေထဲမှာ သိုက်နန်းရှင်တွေ အ ကြောင်းပါပါလာ ပါတယ် ဘိုးဘိုး “တကယ်ရှိရဲ့လားဗျာ” လို့မေးတော့ တကယ်ရှိတာပေါ့ မြေးရဲ့ ဘိုးဘိုးဆို အသက်၂၅နှစ်လောက်က သိုက်တူးတဲ့ ဆရာတွေနဲ့လိုက်ပြီး တပည့်ခံ သိုက်တူး ဖူးတယ် ၊ ဟုတ်လားဘာတွေရတုန်း ရတာပေါ့ ငွေဒင်္ဂါးပြားတွေ ၊ ဘယ်မှာလဲ ပြ ဆိုတော့ ရောင်းစားပြစ်ပြီလေ နှစ်တွေကြာမှကိုး အဲလိုလေးတွေ မကြာမကြာပြောပြဖူးပါတယ် ။
သိုက်ဆိုတာကို ဘာမှန်းမသိပေမဲ့ ၊ ၇တန်း၈တန်း ကျောင်းသားလောက်ဘ၀မှာ ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခရဲ့ ဥစ္စာစောင့်မလေး မြနှင်းဆီ စာအုပ်ကို စဖတ်ပြီး ကျွန်တော် သိုက်အကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားမှိသွားပါတယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ထဲက ဗိုလ်တစ်ထောင်ဘုရားဝန်းထဲမှာ မြနန်းနွယ် သိုက် ရှိတယ်ဆိုတာရယ် ၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်က ကျိုက္ကလို့ ကျိုက်ကလဲ့ ဘုရားတွင်းထဲက နဂါးသိုက် ဆို တာရယ် ၊ တွံတေးဗောင်းတော်ချုပ် ဘုရားက ဗောင်းတော်ချုပ် ဘုရားသိုက်ဆိုတာရယ် ၊ သံသဗွတ် ချောင်းထဲက ရွှေဂျိုးဖြူနဲ့ မူလခဲသိုက်ဆိုတာရယ် ၊ ဒေးဇွန်းပါ သိုက်နန်းက မမင်းမှိန် နဲ့ မမင်းရှိန်ဆိုတဲ့ ဥစ္စာစောင့် ညီအစ်မတွေဆိုတာရယ် ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲမှာ ချာလည်ပတ်လည် ရိုက်နေပါတယ် ၊
ဘိုးဘိုးကိ်ု “သိုက်ဆိုတာ ဘယ်လိုဟာတွေတုန်း” ဘိုးဘိုးလို့ မေးကြည့်တော့ “ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကို စောင့်ရှောက်နေရတဲ့ အသူရကာယ်လို့ ခေါ်တဲ့ပြိတ္တာတွေတဲ့ ၊ နဂါးသိုက် ဆိုတာကရော အတူတူဘဲကွယ့် ၊ အရင်ဘ၀ကလူတွေဘဲ သူတို့ပစ္စည်းတွေကိုစွဲလန်းပြီး မကျွတ် မလွတ်ဘဲ ပြန်လည်စောင့်ရှောက်နေရတဲ့ လူတွေ ၊ ဒါမှမဟုတ် ဆိုင်ရာနတ်တွေက ဒီပစ္စည်း တွေကတော့ ဘုရားပိုင်ပစ္စည်းတွေ မင်းတို့တွေစောင့်ရှောက်ကြ လို့အမိန့်ပေးထားလို့ စောင့် ရှောက်နေရတဲ့ နတ်ပြိတ္တာတွေကိုလဲ ဥစ္စာစောင့်လို့ဘဲ ခေါ်ရတယ်မြေးရဲ့” လို့ပြောပါတယ် ။
“ဘိုးဘိုးဒါဆို အသူရကာယ်ပြိတ္တာနဲ့ နတ်ပြိတ္တာ ဘယ်လိုကွာလဲ ဘိုးဘိုးရဲ့”လို့ မေးကြည့်တော့ ၊ အသူရကာယ်ပြိတ္တာတွေက အပါယ်လေးဘုံသားတွေလို့ ဆိုပါတယ် ၊ နတ်ပြိတ္တာဆိုတာကတော့ နတ်စာရင်းဝင် တဲ့ နတ်ပြိတ္တာတွေလို့ဆိုပါတယ် ၊ ကျွန်တော်စာလေး အနည်းငယ်ဖတ်တတ်တဲ့ အကျင့်ရလာတဲ့အခါ ထိုပြိတ္တာနှစ်မျိုးရဲ့ပြဿနာကို ကျီးသဲလေးထပ် ဆရာတော်ဘုရားကြီး ရေးသားပြုစုတဲ့ “စွယ်စုံကျော်ထင် ပုစ္ဆာကျမ်း”မှာ အဲဒီပြဿနာကိုသွားတွေ့ပါတယ် ၊ ပုစ္ဆာနံပါတ် ၄၆၀ပါ မေးထားတဲ့ မေးခွန်းလေးက “လူတို့ပညတ် ၊ လေချွန်နတ် ၊ သည်နတ်ဘယ်ဘုံသွင်းမည် နည်း”လို့မေးထားပါတယ် ၊ ထိုပုစ္ဆာရဲ့အဖြေကို စွယ်စုံကျော်ထင်ကျမ်းရဲ့ စာမျက်နှာ ၃၀၈မှ၃၀၉ထိ ဖြေကြားထားပါတယ် ၊
အဓိပ္ပါယ်ကတော့ နတ်ပြိတ္တာဆိုတာ လူဘ၀မှာတုန်းက မကောင်းမှု့လဲ လုပ်တယ် ၊ ကောင်းမှုလဲလုပ်တယ် အဲလိုလူတွေသေခါနီးလို့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုက အားကြီးတယ် ဆိုရင် နတ်ပြည်ခြောက်ထပ်ရဲ့ အောက်ဆုံးနတ်ဘုံဖြစ်တဲ့ စတုမဟာရာဇ် နတ်ဘုံမှာ ဖြစ်တယ် ဆိုပြီး ဖြေကြားထားပါတယ် ၊ သစ်ပင်စောင့်တဲ့ ရုက္ခစိုး ၊ ဗိမ္မာန်စောင့်တဲ့ ဘုမ္မဇိုဇ်း ၊ မြေဘုတ်ဘီလူး ၊ ယက္ခလို့ ခေါ်တဲ့ အပင်မှာ တိုက်၊အိမ်တွေနဲ့ နတ်ကွန်းတို့မှာစောင့်တဲ့ ဘီလူး ၊ ကုမ္ဘာန် စသော နတ်ပြိတ္တာတို့ဟာ စတုမဟာရာဇ်နတ်စာရင်းမှာ သွင်းယူရမယ် ၊ စတုမဟာရာဇ်နတ်လို့ မှတ်ရမယ် လို့ ဆိုပါတယ် ၊ ဒါကတော့ နတ်ပြိတ္တာဆိုတဲ့ အပိုင်းပါ ၊ တစ်ဆက်ထဲမှာဘဲ သပြေကန်ဆရာ တော်ဘုရားကြီး ရေးသားတော်မူတဲ့ ပရိတ်ကြီးနိဿယစာအုပ်မှာ အာဋာနာဋိယ သုတ်နိဿယ မှာ စတုမဟာရာဇ်နတ်ဘုံဟာ နတ်မင်းကြီးလေးပါးရှိတယ်လို့ သိရပါတယ် ၊နတ်မင်းကြီးတွေဟာ ကမ္ဘာကို လေးပိုင်းပိုင်းပြီး အုပ်ချုပ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ် ၊ အရှေ့ဘက်ခြမ်း ကို ဓတရဋ္ဌခေါ်တဲ့ နတ်မင်းကြီးက စောင့်ရှောက်ပြီး ဒီကမ္ဘာထဲမှာရှိတဲ့ သူ့ထက်အဆင့်တန်းနိမ့် နတ်များကို အစိုးရတယ်လို့ဆိုပါတယ် ၊ တောင်ဘက်အခြမ်းကိုတော့ ၀ိရုဠက ခေါ်တဲ့ နတ်မင်းကြီးက စောင့် ရှောက်ပြီး ကုမ္ဘာန်နတ်များကို စီမံအုပ်ချုပ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ် ၊ အနောက်ခြမ်းကိုတော့ ၀ိရူပက္ခ နတ်မင်းကြီးက ပိုင်ဆိုင်ပြီး နဂါးနဲ့ ဂဠုန်တွေကို အစိုးရတယ်လို့ဆိုပါတယ် ၊ မြောက်အရပ် ကိုတော့ ကုဝေရ နတ်မင်းကြီးကပိုင်ဆိုင်ပြီး အထက်ကဆိုခဲ့တဲ့ ဘီလူးဖုတ်ပြိတ္တာ ရုက္ခစိုး ဘုမ္မဇိုး နတ်တွေကို အစိုးရခါ စီမံခန့်ခွဲတယ်လို့ဆိုပါတယ် ၊
အားလုံးကို အချုပ်အားဖြင့် ဆိုရသော် နတ်ပြိတ္တာများဟာ အသူရကာယ်ပြိတ္တာများနဲ့မတူဘဲ စတုမဟာရာဇ်နတ်ဘုံမှာ အကျုံးဝင်သော နတ်များ ဖြစ်လို့မို့ တရားနာခွင့်ရပါက အရိယာတောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ သူများဖြစ်ပါတယ် ၊ အပါယ်လေး ဘုံဝင် ဖြစ်တဲ့ အသူရကယ် ပြိတ္တာများကတော့ ဆိုင်ရာအကုသိုလ်ကြောင့် အပယ်လေးဘုံ သားများ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် တရားနာခွင့်ရပါလျှင်လဲ အရိယာမဖြစ်နိုင်တဲ့ အပြင်သရဏံဂုံ ပင်မတည်နိုင် ကြောင်း သပြေကန် ပရိတ်ကြီးနိဿယမှာ ရေးသားထားပါတယ် ၊ ဒီနားမှာ စကားတစ်ရပ်အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုးကွယ်နေတဲ့ အတွင်း၃၇ ၊ အပြင်၃၇ ၊ အရံ၃၇ ဟူသော နတ်များ မှာ ၊ အသူရကာယ်ပြိတ္တာများဖြစ်ပြီး ထိုနတ်များကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ပါက ဗုဒ္ဓဘာသာ ပင်မ ဟုတ်တော့ဘဲ မိမိ၌ ရှိသော သရဏံဂုံပင် ပျက်ကြောင်း မေတ္တာရှင် ဆရာတော်အရှင်ဇန၀ရဲ့ “မြတ်သရဏဂုံ ” ဓမ္မဒါန စာအုပ်ငယ်မှာ မှတ်သားနာယူဖူးပါတယ် ။လူတွေဘာကြောင့် သရဏံဂုံ အပျက်ခံပြီး ကိုးကွယ်နေကြပါလိမ့်လို့ ၊ တွေးကြည်မှိဖူးပါတယ် ။
ရှေးမြန်မာမင်းများဟာ ဗေဒင် ယတြာ ဓာတ်ရိုက် ဓာတ်ဆင် ၊ စနည်း ၊ တဘောင် ၊ သိုက် ၊ ဓာတ် စသော ရိုးရာယုံကြည်မှု အင်မတန်ပြင်းထန်ပါတယ် ၊ မြန်မာမင်းတို့ရဲ့ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ တွေကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ ၊ လမိုင်းဝန် လို့ခေါ်တဲ့ ၀န်ကြီးတစ်ပါး ခန့်အပ်ထားတာကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်၊ ကျက်သရေဆောင် ရွှေစလွယ်ရမင်းကြီး မြင်းမှူးမင်းသား ဦးမောင်မောင်တင်ဟာ သူ့ရဲ့ “ရွှေနန်းတော်သုံးဝေါဟာရ အဘိဓာန်မှာ ” လမိုင်းဝန်ဟူသည် ငါအရှင်တို့ ဇာတာဆန်းလဂ် တို့အလျှောက်ပေါ်ပေါက်သော အရပ်ရပ်ရှိ သိုက်စာ များဖတ်ကြားရခြင်း ၊ ဘုရားတည်ကျောင်းဆောက် စသောကောင်းမှုတော်တို့ကိုပြုရာ တွင်နောင်လာနောင်နှောင်း အရှည် တည်တံ့အောင် စတေးဖို့ရာ စီမံခြင်း ၊ တောင်ပြုန်းပွဲ ၊ ရတနာ့ဂူပွဲ ၊ ပခန်းမင်းကြီးပွဲ စသော အရပ်ရပ် ဗလိနတ်စာ များတင်သွင်းဆက်သရန် ငါဘုရင်မင်းမြတ်ကိုယ်စား စီမံခန့်ခွဲရသူလို့ လမိုင်းဝန်အမိန့်ပြန်တမ်းမှာ ထည့်သွင်းဖော်ပြပါတယ် ၊ လမိုင်းဝန်ဟာ ဘုရင်ကောင်းမှုပြုလုပ်တဲ့ အခါမှာ ဘုရင့်နောက်က လိုက်ပြီး ၊ ဘုရင်ဘုရားတည်ပြီးလို့ နောင်အတွက် လှူပြီဆိုရင် အကြွေးကံသုံးလို့ ခေါ်တဲ့ မြေပေါ်ပစ္စည်းတွေကို လှူဒါန်းပါတယ် လယ်မြေတွေလှူပါတယ် ၊ ထိုလယ်မြေတွေကို စောင့်ရှောက်ဘို့ ထောင်နှစ်ကြီးသမားများ စတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကျသူများကို ပြစ်ဒဏ်ပေါ့လျှော့ပြီး ဘုရား ကျွန်ကျောင်းကျွန်လှူတော်မူပါတယ် တရံတခါမှာလဲ ကျေးတော်မျိုး ‘ကျွန်’တော်မျိုးထဲမှ ဘုရား ကျွန်လှူပါတယ် ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲ အသည် ကပ်ပါး စသည့်တို့ကို လမိုင်းဝန် တင်ပြချက်ကို ကြည့်ပြီး သင့်တော်သလို ဘုရားကျွန်ကျောင်းကျွန် လှူတန်းတော်မူပါတယ်၊ မြေအောက်မှာ ရတနာတွေ လှူပြီးပြီဆိုရင် ထိုရတနာတွေကို စောင့်ရှောက်ဖို့ ဘုရင့်အမိန့်နဲ့ လမိုင်းဝန်က ထောင်ဒဏ်နှစ်ကြီးသမားများကို သတ်ဖြတ်စတေးတော်မူပြီး အကြွေးကံသုံး ချတော်မူပါတယ် ၊ ထိုထိုကိစ္စအ၀၀ကို ဆောင်ရွက်ရသူမှာ လမိုင်းဝန်ဖြစ်ပါတယ် ၊ လမိုင်းဝန်ဟာ မြေပေါ်မြေအောက် ရတနာတွေလှူဒါန်းပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက် သိုက် စာရေးပြီး တစ်နေရာမှာထားရပါတယ် ၊ နောင်လာ နောင်သာများက ထိုထိုသိုက်စာတို့ကို ရပြီး တူးဖော်ယူငင်တာကို သိုက်တူးတယ်လို့ ခေါ်ပါတယ် ။
ဘိုးဘိုး “ဒီနတ်မင်းကြီးတွေက ဒီပစ္စည်းတွေကို ဘုရားပိုင်သိမ်းပြီး ဘာလုပ်ကြမှာမို့လဲ” လူ တွေ ပေးလိုက်ပါလား ၊ မဟုတ်ဘူးကွဲ့ သူတို့ဟာလုပ်စရာရှိတယ် ၊ “ဘာလုပ်မှာတုန်းဘိုးဘိုးရဲ့” နတ်တွေက ရတနာတွေကို ၊ ဘိုးဘိုးလဲ ငယ်ငယ်က ဘိုးဘိုးနဲ့ သိုက်အတူတူ တူးခဲ့တဲ့ ဆရာကြီး ကိုမေးဖူးတယ် ၊ သူကဒီလိုပြောတယ် ၊ “ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ အသီတိ သာဝက၀င် ဓူတင် ဧတဒဂ်ရတဲ့ အရှင်မဟာကဿပ ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာ ယခုအိန္ဒိယ နိုင်ငံအတွင်းက လှိုက်ဂူကြီး တစ်ခုထဲမှာ ၊ ပရိနှိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူထားတယ် ၊ သူ့အဓိဋ္ဌာန်အရ အရိမေတ္တယျ မြတ်စွာဘုရား ပွင့် တော်မူတဲ့ အခါကျမှသာ တေဇောဓာတ်လောင်ကျွမ်းမှာမို့ ၊ အဲဒီတေဇေဓာတ်လောင်တဲ့အခါ နတ်တွေက ဒီရတနာတွေနဲ့ ရှင်မဟာကဿပကိုယ်တော်ကြီးကို ပူဇောဖို့ စုဆောင်းထားတာလို့ ပြောဖူးတယ်ကွဲ့” ၊ ဒါဆိုဒီနတ်တွေက အရိမေတ္တယျ ဘုရားပွင့်တဲ့ အထိ သူတို့က နေနိုင်မှာမို့လား သူတို့က သေတော့ဘူးလား ဘိုးဘိုးရဲ့ ဘယ်သေအုံးမလဲ ငယ်ငယ်လေးရှိအုံးမယ် သူတို့က။ ဟင် ဘာလို့လဲ ဘိုးဘိုး ၊ ၊ သူတို့နတ်ပြည်တစ်ရက်မှ ဘိုးဘိုးတို့ လူ့ပြည်မှာ နှစ်ငါးဆယ်ကြာတယ်။ ဟင် ဟုတ်လို့လား ဘိုးဘိုးကလဲ ဟုတ်ပါတယ်ကွယ် ၊ ဒါတောင် အနိမ့်ဆုံးနတ်ဘုံကွယ် သူ့အထက်က တာဝတိဲသာ နတ်ပြည်ဆိုရင် လေးနဲ့မြှောက်ယူရတယ် ၊ ယာမာနတ်ပြည်ကို တာဝတိဲသာ နတ် သက်နဲ့ လေးဆမြှောက်ရတယ် အဲလိုဆင့်ကဲဆင့်ကဲ လေးနဲ့မြှောက်ယူရတယ် ဟိုးအထက်က ပရနိမ္မိတ ၀ဿဝတီဘုံထိ အဲလိုမြှောက်ယူရတယ် ။
အို ဘိုးဘိုးကလဲ …။
ဘိုးဘိုး ဒီနေ့တော့ ဘိုးဘိုးပြောပြလို့ နတ်ပြိတ္တာနဲ့ ၊ အသူရကာယ် ပြိတ္တာဆိုတာရယ် ၊ သိုက်အ ကြောင်းရယ်တော့ တီးမှိခေါက်မှိ ရှိပါပြီ ၊ နောက်နေ့ကျမှ ဘိုးဘိုးသိုက်တူးခဲ့တာတွေကို ပြောပြ အုံးသိလား ၊ အခုအိပ်ချင်ပြီ ကောင်းပြီကွယ် အိပ်ပါ ။ ဘိုးဘိုးကို ဦးသုံးကြိမ်ချပြီး ကျွန်တော် ကျွန်တော့်အခန်းမှာ သွားအိပ်လိုက်ပါတော့တယ် ။
ကော်ပီ ကူးယူခြင်း (5)
ပဌာန်းပါဠိတော်အကျယ် - မင်းကွန်းဆရာတော်
Copyright © 2012 ဓါတ်လုံး.